कपुरी विशेष Archives - kapurionline
Category: कपुरी विशेष
४० बर्ष देखि पार्टीका संगठनमा आवद्ध कार्कीले एमाले कपिलवस्तुको सचिवमा उम्मेद्वारी दिने।
Posted on January 2, 2022 by कपुरी अनलाइन
हरि आचार्य, कपिलवस्तु। विगत ४० बर्ष देखि नेकपा एमालेका विभिन्न संगठनमा आवद्ध रहि पार्टीका हरेक गतिविधिमा सक्रिय रुपमा राजनीति गर्दै आउनुभएका विश्व कार्कीले एमाले कपिलवस्तुको सचिव पदमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ । वि.स. २०३८ सालको माघमा जनता मा.वि.पिपरामा भएको स्ववियु निर्वाचनमा कक्षा ४ मा अध्ययन गर्दा देखिनै पार्टीको जनवर्गीय संगठन अनेरास्ववियुको प्यानलमा मतदान गरि…
शिवराजमा खेल महोत्सव सुरु (फोटो फिचर) ।
Posted on December 16, 2021 by कपुरी अनलाइन
केशव बेल्वासे कपिलवस्तु कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा आजबाट खेल महोत्सव सुरु भएको छ । समृद्ध नगर सुखि नगरवासि, स्थिर र दिगोविकासको लागि, स्वास्थका लागि खेलकुद राष्ट्का लागि खेलकुद भन्ने नारा सहित खेल महोत्सव सुरु भएको हो । महोत्सवको उद्धघाटन समारोहमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश शभा सदस्य अर्जुन कुमार के सिले अबको दिनमा खेललाई पनि व्यवसायिक रुपमा अगाडि…
मापदण्ड विपरीत जोकोही खोलामा नदिजन्य सामाग्री उत्खनन् ।
Posted on December 13, 2021 by कपुरी अनलाइन
कपिलवस्तु । शिवराज नगरपालिका वडा ९ मा रहेको जोकोही खोलामा मापदण्ड विपरीत नदिजन्य सामाग्री उत्खनन् गरिएको पाइएकोछ । मंसिर १६ गते नगरपालिकासंग सम्झौता भई काम सुरु गरेको खड्का काष्ठ फर्निचर सप्लायर्सले केहि दिनमै मापदण्ड विपरीतका औजार प्रयोग गरि नदिजन्य सामाग्री उ्रत्खनन भएको स्थानियले बताएका छन् ।उक्त खोलामा दुई दिन सम्म औजार प्रयोग गरि उत्खनन भएको…
पौडेलको खोजिकार्य गर्न तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन
चन्द्रौटा । चार दिन देखि बेपत्ता रेहेका कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा न ५ निवासि विक्रम पौडेलको खोजिकार्य गर्न तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिने वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले जनाएको छ । शिवराज ५ का ३३ वर्षिय युवा पौडेलको हाल सम्म पनि स्थिति अज्ञात रहेको र लगातार ४ दिन देखि प्रहरी प्रशासन ,स्थानिय लगायतले खोजि कार्य गर्दा…
दशौं महाधिवेशन अपाङ्ग मैत्री हुने।
Posted on November 22, 2021 by कपुरी अनलाइन
काठमाडौं । नेकपा एमालेको आसन्न १०औं महाधिवेशनको तयारीका लागि लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठनको छलफल सम्पन्न भएको छ । संगठनका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफलको प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा आगामी महाधिवेशनको तयारीका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँटका साथै संगठनका नेताहरुहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रमुख अतिथि गैरेले महाधिवेशनलाई सफल…
Posted on November 8, 2021 November 8, 2021 by कपुरी अनलाइन
निरन्तर चलिरहने जीन्दगीको यात्रा हेर्दै जांदा अचम्मको संसारको जात्रा सबै मान्छे सधै खुसी भएपनि हुने कोही बाँच्ने बिलासमा कोही भने रुने । म पनि त यै भिडको एउटा यात्री परे ढकमक्क फूले कैले¸कैले भने झरे। मेरापनि गहभरी रसाउंछन् आंशु बेदनाको पोको बोकी खै कसरी हांसु । बोलेकै छु¸हिंडेकै छु बाँच्नुपर्ने रै छ आफ्ना कथा मनभित्र…
विचित्र धर्ति विचित्र मान्छे !
Posted on November 8, 2021 by कपुरी अनलाइन
विचित्र धर्ति विचित्र मान्छे अनौठो संसार ति मान्छे सबै मिलेर बन्ने जीवनको आधार । भरोसा हुन्न मान्छेको चोला कहिले सकिन्छ पानीको माथी लेखेको नाम जसरी मेटिन्छ । लेख्दछु आज कहनी मनको कलम समाई पिंजडा भित्र युनेको सुगा के वस्थ्यो रमाई । हामी थ्यौ दुर्इ देहमा तर आत्मा एउटै थ्यो छोडेर गए लोचनका तारा जीवन शुन्य…
शिक्षकलाई तलब खुवाउन केरा खेती
राम अवतार चौधरी । विगत डेढ बर्ष देखि काेभिडले प्रभावित भएका हरेक गतिविधि क्रमश निरन्तरता पाउँदै आइरहेकाे छन् । यस्तै निरन्तरता पाउँदै आएका गतिविधि मध्ये शिक्षा क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा हुनु एकदमै आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षा बनाउनमा शिक्षककाे महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । तर त्यस शिक्षकलाई सेवा प्रवाह गर्न आर्थिक…
मदुवा गाउँ एमालेमय काँग्रेस ईकाई उपसभापति सहित ६३ जना एमालेमा प्रवेश ।
Posted on November 2, 2021 by कपुरी अनलाइन
शिवराज नगरपालिका वडा न ३ मदवा गाउँ एमालेमय भएको छ । शिवराज नगरपालिका वडा ३ मा नेकपा एमाले वडा कमिटिको अयोजनामा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा ६३ जना काँग्रेश परित्याग गरि एमालेमा प्रवेश गरेका हुन । वडा न ३ ले नेपालीहरुको महान चाड शुभ दिपावलि तथा छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना…